China Umgangatho ophezulu wenayiloni pulley yomzi mveliso kunye nabathengisi | IH & F. nylon
Iipulley zenylon esizivelisayo zilula ngokobunzima kwaye kulula ukuzifaka kwindawo ephezulu. Iipleyiti zenayiloni zisetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo ezahlukeneyo zokuphakamisa, ngokuthe ngcembe zitshintsha iiplale zentsimbi ezindala kunye nezibonelelo zazo ezizodwa.
Uhlobo lweTywina:vula / tywina
izinto:I-chrome yentsimbi / intsimbi ethweleyo
Iipulleys zesiko ubukhulu becala zenziwe ngentsimbi okanye isinyithi. Nangona benomthwalo omkhulu wokuthwala umthwalo, banokunganyangeki kakuhle ukunxiba, kwaye bonakalise intambo yentsimbi. Ukongeza kwinkqubo entsonkothileyo yee-pulleys zentsimbi, eyona ndleko iphezulu kune-MC yenylon pulleys. Ukusetyenziswa kwee-MC nylon pulleys kunamandla. Kulula ukucubungula. Ngethuba nje ifomula ifanelekile, iiplleys ezineemfuno zokusebenza ezahlukeneyo zinokwenziwa. Emva kokusebenzisa i-MC nylon pulleys, ubomi be-pulley bonyuswa ngamaxesha angama-4-5, kwaye ubomi bentambo buyonyuswa ngamaxesha angama-10. Thelekisa "i-pulley yesinyithi" kunye ne "MC nylon pulley", i-MC nylon I-pulley inganciphisa ubunzima be-boom kunye nentloko ye-boom ngama-70%, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, ukuphucula umsebenzi wokuphakamisa kunye nokusebenza komatshini kuwo wonke umatshini, kulula ulondolozo, disassembly kunye nendibano, kwaye akukho ukuthambisa ioyile. Abavelisi abaninzi beekreni phesheya, ezinje ngeLiebherr eJamani kunye neKato Co., Ltd. eJapan, bebesebenzisa i-MC nylon pulleys ukusukela ngeminyaka yee-1970.
Isilinda esipheleleyo se-roller cylindrical esetyenziswa ngokubanzi kwiiMotor, Shaft Machine, iGenerator, Rolling Mill, Reducer, Screen Vibration kunye neCrane, njl.
100 Piece / Pieces Inyanga nganye siwisa Cable Pulley for crane
Ukupakisha kunye Shipping:
1. Ingxowa yeplastiki, ibhokisi enye, ibhokisi kunye nepallet.
2. Iphakheji yemizi-mveliso.
3. ityala leplanga, ipallet
4. Ngokweemfuno zabathengi
Egqithileyo Nylon ibhanti pulley eyenziwe e-china
Okulandelayo: I-nylon roller kwisitokhwe
Umgangatho ophezulu wenayiloni Pulley
Iplastikhi yeNylon Pulley
Ukutyibilika Door nenayiloni Pulley
Ukutyibilika wenayiloni Pulley
Iipleyile ezincinci zeNylon
Unikezelo lwenayiloni Pulley
I-nylon Pin enobukhali obuphezulu